नयाँ वर्षको लागि रातो वर्ग: समीक्षा
रूसी राजधानी को गर्व - लाल वर्ग। नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा, यस क्षेत्रमा विशेष ऊर्जा exudes। यहाँ, को झंकार पिटे रोमाञ्चक संगीत पकड र उज्ज्वल आतिशबाजी गरौं। के यो बिन्दुमा मनोरञ्जन मा देश को साधारण नागरिकहरु के, कृपया लेख पढ्नुहोस्।
कार्य को योजना
दुवै बच्चाहरु र डिसेम्बर 31 को रात मा वयस्क जनवरी 1 मा, चमत्कारी र अविश्वसनीय कुरा प्रतीक्षा। निस्सन्देह, धेरै मानिसहरू एक असामान्य सेटिङ मा नयाँ वर्ष हेर्न चाहन्छु। तसर्थ, साँघुरो परिवारमा इच्छुक मा भोज को सट्टा थप र थप मान्छे देश को बीचमा एक छुट्टी मनाउन।
महानगरीय दर्शक लागि प्रत्येक वर्ष जादुई शो, अचम्मलाग्दा आतिशबाजी र मूल आश्चर्य तयार। लाल वर्ग मा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या - सबै भन्दा राम्रो विकल्प जवान मान्छे को लागि। साथै, यो कार्य योजना पनि धेरै आर्थिक छ। Vacationers एक छुट्टी पोशाकहरू, महंगा रक्सी पिउँछन् र एक शानदार तालिका पैसा खर्च गर्न आवश्यक छैन। सबै अतिथि निःशुल्क कन्सर्ट हेर्न र हँसिलो कम्पनी मा एक ठूलो रात हुन सक्छ।
तथापि, क्रममा सम्पूर्ण टीम एक पटक पार्टी जानको लागि विजय सफल राम्रो - यो "अनुभव" को सल्लाह हो। तथ्यलाई साथीहरूसँग भेट्न मानिसहरूको जस्तै ठूलो मा लगभग असम्भव छ भन्ने छ। केही मानिसहरू गर्न मार्फत प्राप्त गर्न व्यवस्थापन नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या। मोबाइल संचार वस्तुतः अवस्थित छ।
मास्को मा नयाँ वर्ष मनाउन - धेरै रूस को सपना। रातो रात धेरै सान्ता क्लाज मा वर्ग र हिम मेडन मा। यी वर्ण साथै क्षेत्र दन्तिये अन्य वर्ण भरिएको छ। लुकाएको मान्छे धेरै अनुकूल र सबैको साथ तस्वीर लिन इच्छुक छन्।
सडक मा, खुला हावामा, मजा गायन र नृत्य प्रदर्शन गर्ने को लोक शैलीमा। नेतृत्व नृत्य हुन र साथ गाउन सक्नुहुन्छ। मुड र उत्सव रोशनी थप्छ। 2016 को एक हाइलाइट लेजर शो, जो रोमाञ्चित मात्र आगंतुकों, तर पनि राजधानी वसोवास थिए थियो।
accustomed भएकाहरूलाई तपाईं एक मा नयाँ वर्ष मनाउन गर्नुपर्छ, सक्रिय आराम गर्न स्केटिङ रिङ्क। रातो वर्ग मा, उहाँले 2000 देखि काम गर्दछ। उत्सव रात, त्यो, पनि, आगंतुकों पाए। मुड राम्रो संगीत र उज्ज्वल रोशनी उठाउनु। तथापि, अतिथि भन्न रूपमा मूल्य कम प्रवेश हुन सक्छ। साथै, मानिसहरू नयाँ वर्षको रूपमा, तपाईं अग्रिम टिकट किन्न आवश्यक भन्ने तथ्यलाई रुचि छैन रात छ गर्न लगभग असम्भव।
सबै भन्दा राम्रो परम्परा
किन मानिसहरू वर्ग मा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा जाने मुख्य कारण - यो salutes। धेरै पर्यटकहरु र आगंतुकों तिनीहरूले संसारको कुनै पनि अन्य राजधानी देख्न छैन यस्तो, सुन्दर शानदार र लामो आतिशबाजी कि उल्लेख गरेका छन्। पर्यटकहरू एक धेरै यो स्थान radiates जो असाधारण, विस्फोटक ऊर्जा, अनुभव गर्न यहाँ आउँछन्।
यो सबै छुट्टी परम्परा लाल वर्ग कायम गर्न मद्दत गर्छ। नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या हरेक नागरिक अपील को राष्ट्रपति हेर्न चाहन्छ। विशेष यो घटना सम्झना छैन क्रममा, यो 22 बजे मा सुरु जो कन्सर्ट, रोक्छ। मान्छे आफ्नो भाषण सुन्न सकून्, विशाल स्क्रीन हङ। यो धेरै सुविधाजनक छ - त्यहाँ गए गर्नेहरूलाई द्वारा प्रमाणित।
यो कि इलाका मा रक्सी बेच्न छैन उल्लेख गर्नुपर्छ। तपाईं शैम्पेन बिना उत्सव कल्पना गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं यसलाई घर वा क्षेत्र छोडेर पछि पिउन सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया, भीड बिहान चार नजिक disperses।
2015 रूसी नागरिक को अन्त मा एक फोहर आश्चर्य भयो। को अधिकारीहरु वर्ग मा तिहार पूरा गर्न निर्णय मानिसहरूको सीमित संख्या सक्छन्। निमन्त्रणा को एक निश्चित भाग व्यक्तिगत आउन। एक कार्यक्रम देश को इतिहास को एक जीवंत भाग भएको छ कि - डिसेम्बर 31 "निलो लाइट", यहाँ खिच्नुभयो थियो।
तर, धेरै मान्छे नयाँ वर्ष मा लाल वर्ग अन्य कारणहरूले गर्दा पहुँच प्रतिबन्ध के बलियो बयान बनाउन। तिनीहरूले यो मात्र गैर-स्लाव भाषाहरु उपस्थिति को वहाँ कम व्यक्ति पायो गर्न गरिन्छ पक्का हो।
साँच्चै, धेरै आगंतुकों प्रवासी श्रमिकहरुलाई को अर्को बाँकी जस्तो छैन। अन्य अतिथिहरूको अन्य nationalities को प्रतिनिधिहरु राजधानी को आदिवासी मान्छे, यहाँ मनाउन सही छ, पक्का छन्। र यस्तो सम्भावना तिनीहरूलाई वंचित गर्न गलत, inhumane छ।
अनुकूल कानून प्रवर्तन
धेरै आगंतुकों निरंतर प्रयास को क्षेत्र मा कि गुनासो। पनि आमन्त्रित नियन्त्रणमा भीड राख्न मदत थिएन संख्या सीमित। तर लगभग सबै त्यहाँ भएको पनि एक मातेका दर्शक लगभग कुनै पनि भन्छन्। सामान्यतया युवा, हँसिलो कम्पनीहरु धेरै चलाउँछ। व्यवस्था enforcers पूर्ण अर्डर राख्नुहोस्। धेरै प्रहरी अधिकारीहरू लाल वर्ग मा नयाँ वर्ष मनाउन सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। युवा अधिकारीहरु संग फोटो सबैलाई गर्छन्। वर्दी मा पुरुष र महिला धेरै अनुकूल र क्यामेरा लागि पोज गर्न इच्छुक छन्।
आगंतुकों र माल को मूल्यहरु प्रोत्साहन छैन। लागत तातो पेय, खाना र स्मृति चिन्ह एकदम overstated। साथै, थुप्रै मानिसहरूले बिना हिउँ जाडो को मूड बिगार्छ। Muscovites र आगंतुकहरुलाई snowdrifts मा शहर देखेर प्रयोग गरिन्छ। र मौसम छैन हाल को वर्ष मा खुसी हुन्छ। तर न्यानो तापक्रम अब प्ले लागि अनुमति दिन्छ, र स्थिर छैन।
वर्ष बिना मानिसहरू देश को मुख्य क्षेत्र प्राप्त गर्न व्यवस्थित के छैन साझेदारी गर्नुहोस्। कारण इनपुट आदेश गर्ने प्रहरी, नियन्त्रण छ। क्षेत्र पूर्ण छ भने, फाटक नयाँ पर्यटकहरूलाई बन्द छन्।
हामी एक मेटल डिटेक्टर पास गर्न छ। लामबद्ध धेरै लामो छ। कानून प्रवर्तन अधिकारीहरु झोला र खोज मान्छे मा हेर्न सही छ। तिनीहरूले रक्सी खोस्नु। Vacationers शायद प्रहरी धोका सफल र रक्सी संग बोक्न ती विभाजित छन्। त्यसैले हामी पनि बिना लाल वर्ग मा नयाँ वर्ष मनाउन छ शैम्पेन को एक बोतल।
धेरै vacationers को वरपर मा मना थिए। झंकार को युद्धमा - तथापि, अक्सर, पनि एक सय केही किनभने हल्ला, केन्द्र बाट मीटर, आतिशबाजी र संगीत जसको लागि लगभग सबै आएको सुने। तर अलग तपाईं सजिलै प्लास्टिक कन्टेनर देखि चम्केको पेय आनन्द उठाउन सक्छौं। तथापि, आतिशबाजी को अवैध प्रयोगको लागि त्यहाँ लगभग कुनै एक हेर्दै थियो छ। तसर्थ, माथि र फेरि माथि मेरो खुट्टा अन्तर्गत firecrackers विस्फोट। साधारण राहगीरों अस्पताल गर्न बल्न संग वितरण गर्दा अवस्थामा थिए।
हड्डी गर्न चिसो र हावाको, चिसो मा ज्ञात छ, जस्तै। त्यसैले, धेरै आगंतुकों एक चिसो संग घर फर्कने। पहिलो पटक बीचमा आराम गर्ने ती, यो पहिलो स्थानमा पोशाक गर्न सिफारिस गरिएको छ सुन्दर, तर न्यानो र सहज छैन।
लागि धेरै मानिसहरू सपना - रातो वर्ग मा नयाँ वर्ष मनाउन। को अक्सर नकारात्मक को उत्सव को समीक्षा। अतिथिहरूको यो कार्य को मुख्य बेफाइदा कि आशा वास्तविकता भेट छैन छ कि। मात्र, केहि वर्ष मा कन्सर्ट कार्यक्रम अत्यन्तै monotonous र बोरिंग थियो, त्यसैले ती पनि जो पछि आएको, तपाईंको आँखा परिहाल्छ कि पहिलो कुरा - फोहोर र भाँचिएको ग्लास को एक हिप।
धेरै, इलाका मा कि लुकाएर लैजानु रक्सी थाह पिएको सीधा प्रवेश अगाडि हुन सक्दैन। तसर्थ, नागरिक सबै वरिपरि उत्सव बिगार्छ अनुपयुक्त छन्।
सार्वजनिक परिवहन वा आफ्नो कार?
वरपरको सडकमा कार पार्क। तर, धेरै मान्छे नजिक क्षेत्र गर्न कार छोड्न चाहनुहुन्छ - यो घरबार बिन्दु हो। खाली बाटोमा पार्क फलाम घोडा, तपाईँले यसलाई पर्वहरू पछि बन्द हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार गर्न भने पनि। यस मामला मा, घर पैदल, मातेका भरिएको छ जो ट्याक्सी वा सार्वजनिक परिवहन, द्वारा, कहिलेकाहीं पनि अनुकूल, यात्रु फर्कन हुनेछ।
पाहुनाहरूको थुप्रै यो धेरै लत्तो लाल वर्ग हो भन्नुभयो। नयाँ वर्षको, यो परिवहन को एक सुविधाजनक काम मोडमा उल्लेख गर्नुपर्छ। तसर्थ, ठूलो पार्टी छोडेर घर मा उत्सव जारी - धेरै सजिलै।
मेट्रो सामान्यतया3सम्म 2:00 AM खुला छ, र बसें। कि पछि, परिवहन छोटो ब्रेक लागि रोक्छ, र बिहान फेरि सामान्य मोडमा मलिन यात्रु सुनाउँछन्। राजधानी को अतिथि, र आफ्नो काम को सकारात्मक मूल्यांकन को आदिवासी बासिन्दाहरू रूपमा। आखिर, सार्वजनिक परिवहन मास्को को केन्द्र को कुनै पनि क्षेत्र बाट प्राप्त गर्न सजिलो र आर्थिक सक्षम। त्यसैले यसलाई आफ्नो कार लिन र त्यसपछि पार्किङ स्थान फेला आवश्यक छ।
एक उत्सव रातको लागि यहाँ भएको गर्नेहरूलाई, यो रक्सी पिउने र तातो पेय शेयर छैन सिफारिस गरिएको छ। यो कफी वा चियाको थर्मस लिन राम्रो छ। यस्तो कन्टेनर प्रहरी समस्या बिना बित्दै। अर्को टिप: तपाईं 22 घण्टा आवश्यक ठाउँमा प्राप्त। वास्तवमा, यो समय पछि, क्षेत्र सामान्यतया पहिले नै क्षमता गर्न भरिएको छ।
कसरी नयाँ वर्ष मनाउन लाल वर्ग मा, चिरपरिचित र राजधानी वसोवास। सुरक्षा अनुकूल, तर कठोर, त्यसैले तपाईंको आफ्नो खाना र शैम्पेन बोक्न अनुमति हुनेछैन। तथापि, एक पटक भन्दा बढी भएका मान्छे राजधानी शेयर स्वादिष्ट खाजा कि हिंडे - सायद। धेरै आगंतुकों पछि फिर्ता जो कार, खानेकुरा छोड्नुहोस्। आफ्नो भोक र तिर्खा पूरा तिनीहरूले मास्को फेरि हिंड्न जारी राखे। तर, एकपटक फेरि त्यहाँ केन्द्र मा अत्यन्तै कठिन छ भन्ने थाह हुन।
जीवन को लागि एक स्मृति - रातो वर्ग मा तिहार को बैठक देखि छाप। यस्तो घटना गर्व र brag आफ्नो मित्र र परिवारका लागि हुन सक्छ।
विश्व दिन चकलेट को: आनन्द को एक नयाँ परम्परा
विवाह मा रक्सी को गणना। रक्सी गणना सूत्र
कहिले र कसरी दिन एउटा दूत मनाउन?
के तापमान मा विद्यालयमा कक्षाहरू रद्द गर्न? कक्षाहरू को उन्मूलनको। कक्षाहरू को उन्मूलनको जानकारी
को माइक्रोवेव मा पाकेका स्याउ: को नुस्खा
Pha Le Xanh 1 होटल2* (भियतनाम / Nha Trang): होटल समीक्षा
कसरी टूट एडी को छुटकारा प्राप्त गर्न? टूट एडी: लोक उपचार को उपचार
मिश्रको पौराणिक कथाहरु
आलु संग माछा सुखा
एससी कसरी spokes बुनना गर्न?
को bonneted KamAZ - डकार - खेल को संशोधन को र्याली पेरिस सहभागी